Knowledge Archives - Page 88 of 98 -
အမြဲတမ်း ပျော်နေရင် ဘာဖြစ်တတ်သလဲ။
ပျော်ပျော်နေတတ်တာကောင်းတယ် ဆိုပေမယ့် အမြဲတမ်းလိုလို ဆိုရင်တော့ အထင်လွဲမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘာတွေက ပြဿနာလဲဆိုတာတော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်နော်
Posted on February 28, 2017 March 2, 2017 Author Miko	Comment(0)
DIY Love Relationships
ကောင်လေးတွေကပဲ ကောင်မလေးကို စပရိုက်စ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ရိုးသွားပြီနော်။ တကယ်တော့ စပရိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးရယ် ယောက်ျားလေးရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး
Posted on February 28, 2017 March 2, 2017 Author Jasmine	Comment(0)
စာမေးပွဲအတွက် အချက် (၁၀)ချက်
စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် အရေးပါတဲ့ အချက်လေးတွေပါ။ မကြာခင်အချိန်မှာပဲ မတ်လဆိုတဲ့ စာမေးပွဲကာလကို ရောက်လာပါပြီ။ ဒီအချိန်ဟာ ဆယ်တန်းကျောင်းသားတွေရဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲသာမက တက္ကသိုလ်တန်းကျောင်းသားတွေရဲ့ ပထမနှစ်ဝက် စာမေးပွဲကာလလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲကြီးနီးလာတော့ ဘာတွေများလိုအပ်မလဲဆိုတာ ဒါလေးတွေ ဖတ်ထားတော့ ကြိုပြင်ဆင်လို့ရတာပေါ့။ 1. အိပ်ရေးဝစေဖို့ မနက်ဖြန်စာမေးပွဲဆိုတော့ စာမရမှာစိုးပြီး ညလုံးပေါက်စာကျက်တာကို ရှောင်ပါ။ တစ်ပွဲတိုးကျက်ခြင်းဟာ စာမေးပွဲခန်းထဲမှာလည်း အလုံးစုံမမှတ်မိပါဘူး။ 2. အစားကို အချိန်မှန်စား စာလုပ်နေရင်း စားဖို့မေ့သွားတာ/ စာပြီးမှ ထစားတော့မယ်ဆိုပြီး အဆာလွန်သွားတာတွေဟာ ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက် ဗိုက်အောင့်စေပြီး ကိုယ့်စာမေးပွဲကာလကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ အပူအစပ်တွေလည်းသိပ်မစားပါနဲ့။ ဆင်ခြင်ပါ။ 3. ညမအိပ်ခင် စာကို တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ် အိပ်ခါနီး သေချာဖတ်လိုက်တဲ့စာဟာ မနက်နိုးလို့ တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရင် ပိုမှတ်မိပါတယ်။ 4. စိတ်ကိုပေါ့ပါးအောင်ထား စာမေးပွဲဟာ […]
Posted on February 27, 2017 Author Christina Rosy	Comment(0)
Posted on February 26, 2017 February 26, 2017 Author Jasmine	Comment(0)
တစ်ပတ်အတွင်း အလှဖျက်နေတဲ့ အမာရွတ်တွေကို တိုက်ဖျက်ပေးမယ့် နည်းလမ်း(၄)သွယ်ပါ
Posted on February 25, 2017 February 26, 2017 Author Christina Rosy	Comment(0)
ငါလေးဟာ ဆိုက်ကို ကြီး များလား ?
အက်ဒမင် ဆိုရင်လည်း တစ်ခါတစ်လေမှာ ဆိုက်ကိုဆန်ဆန်ပြုမူမိတတ်တာတွေရှိတ
Posted on February 25, 2017 February 25, 2017 Author Comment(0)
သူများထက်ထူးခြားချင်တယ်၊ မတူတဲ့အတွေးအခေါ်ရချင်တယ်ဆိုရင် ဖတ်ကြည့်ပါနော်။
Posted on February 24, 2017 February 26, 2017 Author Miko	Comment(0)
နှစ်ပြန်စာနေမကောင်းသော်လည်း ဆေးသောက်ရမှာကို အဆိပ်သောက်ရမလို သေမလောက်အောင် ကြောက်တတ်တဲ့ ယောင်းယောင်းတို့ဖတ်ရန်။ ကိုယ်တွေက နေမကောင်းရင်တောင် ဖလန်းဖလန်းထနိုင်သေးပေမယ့် စိတ်အရမ်းပူတတ်တဲ့ မေမေ့ကြောင့် ဆေးခန်းပြေး ဆေးသောက်ရတာ ကမ္ဘာနှစ်ခြမ်းကွဲတဲ့ ကိစ္စထက်တောင် ပိုဆိုးပါသေးတယ်။ ဆေးကြောက်တတ်သူတွေမှာလည်း သူတို့အကြောင်းနဲ့ သူတို့ရှိကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခါးတဲ့ဒဏ်ကို မခံစားနိုင်ခြင်းနဲ့ မြိုချရခြင်းပါပဲ။ဒါကြောင့်မို့ နောက်တစ်ခါ ဆေးမကြောက်လေရအောင် ထိရောက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ပေါင်မုန့်နဲ့မျောချပါ။ အစာမရှိပဲသောက်ရတဲ့ ဆေးကလွဲလို့ တခြားဆေးဆိုရင် ပေါင်မုန့်နဲ့မျောချပါ။ လုပ်ရမှာကတော့ ပေါင်မုန့်သေးသေးလေးဖဲ့ပြီး ညက်အောင်ဝါးကာမျိုမချခင် ၀ါးထားတဲ့ပေါင်မုန့်ထဲ သောက်မယ့်ဆေးကပ်ပြီး ရေနဲ့မျောချလိုက်ပါ။ (ဆေးတစ်လုံးသာလျှင်) ၂။ခေါင်းငုံ့မျိုချနည်းလမ်း။ ဒီနည်းလမ်းကတော့ capsule သောက်သူတွေအတွက်ပါ။လွယ်လွယ်လေးပါ။ ဆေးကိုယူ၊ လျှာပေါ်တင်၊ ရေတစ်ငုံစာ ငုံ၊ မေးစေ့ကို ရင်ဘတ်ဖက် ဦးတည်ခေါင်းငုံ့ပြီး မျိုချလိုက်ပါ။ ဒီနည်းလမ်းကို စမ်းသပ်တဲ့ […]
Posted on February 22, 2017 February 22, 2017 Author Christina Rosy	Comment(0)
Posted on February 22, 2017 March 17, 2017 Author Christina Rosy	Comment(0)
ဘ၀ခရီးလမ်းလျှောက်လှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ အချစ်ကို ထည့်စဉ်းစားသင့်ပါသလား။ ကိုယ်က စင်ဂယ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေချိန်မှာ အတွဲတွေကို အားကျမိပါသလား။ ငါလဲသူတို့လို တစ်ယောက်လောက် ထားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးတွေ ဝင်လာချိန်မှာ ဒီစာကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ အချစ်ဟာတကယ်ဘ၀တစ်ခုလုံးကြီးမဟုတ်ပါဘူး။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ကြည့်ပါ။ လူမှုရေး၊ သာရေးနာရေး၊ စီးပွားရေးစသည်ဖြင့် လူတန်းစေ့နေနိုင်အောင် ကြိုးစားနေချိန်မှာ အချစ်ဝင်လာရင် လူအများစုရဲ့ အိပ်မက်တွေက ယိုင်လဲသွားတတ်ကြတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်တွေပြောင်းလဲသွားတတ်ကြတယ်။ အချစ်ကြောင့် ပျော်ရတာထက် စိတ်ညစ်ရတာ၊ ပူပန်ရတာ ပိုများပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေလည် ဆုံးရှုံးသွားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကမိဘကျေးဇူးတောင် မဆပ်နိုင်သေးချိန်မှာ အချစ်အတွက်အသက်ပင်သေသေ၊ အရည်ခမ်းခမ်းလုပ်တော့မလို့လား။ သူမရှိရင် တကယ်ပဲ အသက်မရှင်နိုင်တော့ဘူးလား။ ဝေးပါတယ်။ လူဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချစ်ဆုံးပါ။ ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် ဖူးစာပါမှပေါင်းဖက်ရမှာပါ။ ကံကြမ္မာဆိုတာမမြင်ရပါဘူး။ အချစ်တစ်ခုအတွက်နဲ့ ကျန်တာတွေအကုန်စွန့်လွှတ်တော့မလို့လား။ တစ်ချို့တွေက ပြောသေးတယ်။ ငါတို့က အချစ်ကသပ်သပ်၊ ကျန်တာကသပ်သပ် အကန့်ခွဲတတ်ပါတယ်တဲ့။ ချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေရင် […]
Posted on February 20, 2017 February 20, 2017 Author Miko	Comment(0)